ကင်ဆာ Scorpio White က Lotus အားဖြင့် Pisces အခမဲ့အွန်လိုင်းအကြားအမြင်ရမတ်ေတာသ Tarot စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနည်းပြ - အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ်
အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ဖတ် > ဗီဒီယိုများ > White က Lotus အားဖြင့်ကင်ဆာ Scorpio Pisces အခမဲ့အွန်လိုင်းအကြားအမြင်ရမတ်ေတာသ Tarot စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနည်းပြ
Megan မတ်လ 23, 2017 ဗီဒီယိုများTagged အဘိဥာဏ်လအော adimmix, ကင်ဆာ, ကျောက်သလင်းကလေးများအဘိဥာဏ်စာအုပ်များ, အခမဲ့အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်ချက်တင်, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစာဖတ်ခြင်း, အခမဲ့အဘိဥာဏ်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို, အခမဲ့အဘိဥာဏ် tarot စာဖတ်ခြင်း, int ..., အဘိဥာဏ်အသကျရှငျ, အဘိဥာဏ်အွန်လိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်, တိုက်ရိုက်လွှအကြားအမြင်, ကြာစာဖတ်ခြင်း, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်းကိုချစ်, အဘိဥာဏ်ဖတ်ကိုချစ်, လ, အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ်, ဖုန်းကိုအဘိဥာဏ်, Pisces, အဘိဥာဏ်, အဘိဥာဏ်လအော, အဘိဥာဏ်စာဖတ်ခြင်း, အဘိဥာဏ်ဖတ်, အကြားအမြင်, အစစ်အမှန်အဘိဥာဏ်အကွံဉာဏျ, မြင့်တက်လာ, scorpio, ဝိညာဉ်ရေးရာအဘိဥာဏ်ဖတ်, နေ, သင့်ရဲ့အဘိဥာဏ်စမ်းသပ်ရန်, အဘိဥာဏ်ဟာကြည်လင်ကလေးများ, အဖြူရောင်ကြာပန်း tarota Comment ချန်ထား White က Lotus အားဖြင့်ကင်ဆာ Scorpio Pisces အခမဲ့အွန်လိုင်းအကြားအမြင်ရမတ်ေတာသ Tarot စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနည်းပြအပေါ်
Scorpio, ကင်ဆာ, Pisces အခမဲ့အကြားအမြင်ရမတ်ေတာသ Tarot စာဖတ်ခြင်း။ သြဂုတ်လ 31, 2015 ၏တစ်ပတ်အွန်လိုင်းအဘိဥာဏ် Tarot ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနည်းပြ။ https://youtu.be/ydj-6Uid1TI: ဤအခမဲ့ Tarot ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စာဖတ်ခြင်းအွန်လိုင်း Share
White က Lotus Tarot တစ်နာယကဖြစ်လာ http://patreon.com/whitelotustarot ငါ၏အ Patreon စာမျက်နှာသို့သွားရောက်လည်ပတ်
ငါအလိုလိုအကြားအမြင်ရနှင့်စိတ်ချင်းစာနာမှုနားလည်မှုဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ဖုံးသောအမြှေး (ကိုလည်းကုလားကာကိုခေါ်) နဲ့မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ကျွန်မကိုယ်ရေးကိုယ်တာကြီးထွားမှုနှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်အဘို့အလိုလိုဘဝကနည်းပြသည်။
ငါလက်ခံရရှိသောစာဖတ်ခြင်းစစ်မှန်သောလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ Angelique ကျနော်တို့စကားကိုနားထောငျဖို့လိုအပျမက်ဆေ့ခ်ျများမျှဝေ, သင့်နှလုံးထိတစ်လမ်းရှိပါတယ်။ သူမ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများကျွန်မရှင်းလင်းပြတ်သား၏ search အတွက်မည်သူမဆိုမှသူမ၏အကြံပြုဖို့တှနျ့ဆုတျမဟုတျဘူး, ထိုကဲ့သို့သောကြင်နာမှုနှင့်စစ်မှန်သောဂရုစိုက်တတ်တဲ့နှင့်အတူကယ်နှုတ်တော်မူ၏နေကြသည်။ မာရီယာ
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ clients များကဒီမှာ http://www.whitelotustarot.com/#!client-feedback/cee5 တင်သွင်းကြပါပြီပိုပြီးအတည်ပြုထားသောထောက်ခံစာကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမတ်ေတာသ Tarot စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးနည်းပြ http://www.whitelotustarot.com မှာရရှိနိုင်
White က Lotus Tarot သင့်ရဲ့အနာဂတ်ဖတ်ရှုဖို့မဟုတ်, လက်တွေ့ကျသောအဘိဥာဏ်ညှိနှိုင်းကမ်းလှမ်း, သို့သော်သင်ဘဝအကြောင်းကိုမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုကူညီဖို့ရန်။ White က Lotus Tarot အားဖြင့်အလိုလိုဘဝကနည်းပြပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက် clients များအဓိပ္ပါယ်ရှိသောမျှတတဲ့ဘဝကိုပျော်မွေ့ကူညီဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အတိုင်ပင်ခံ၏လုပ်ရပ်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ Self-လုပ်ပိုင်ခွင့်စနစ်အတွက်ရှိပါသည်။ Tarot ကတ်များကို အသုံးပြု. အလိုလိုသိဘဝနည်းပြ ပတ်သက်. အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာကတ်များနိုင်ပါတယ် imagery ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးချင်းစီကဒ်အတွက်သင်္ကေတများနှင့်ရုပ်ပုံများကို client များသူတို့ကလက်ရှိမည်သည့်စိန်ခေါ်မှုသို့မဟုတ်အခြေအနေပိုကောင်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြည့်စုံနားလည်မှုရဖို့ရန်ခွင့်ပြု, သတိနှင့်မသိစိတ်တစ်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်စိတ်ကူးများ, ဘဝအတွေ့အကြုံများ, ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုတစ်ဦးကို client ရဲ့ဘဝအတွက်အဓိကဖြစ်ရပ်များ၏အကြံအစည်, etc တို့အချင်းများ facing ။ အလိုလိုဘဝကနည်းပြကိုသင်သင်တို့၏အကြံအစည်နှင့်သင်လိုချင်သောဘဝနှင့်အလိုဆန္ဒကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်ချက်နောက်ကွယ်မှစွမ်းအင်ချန်နယ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
မှာငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ [အီးမေးလျ protected]
Instagram ကို: https://instagram.com/whitelotustarot/
Nicoletta Ceccoli အားဖြင့် Ceccoli Tarot အလှဆင်
မူပိုင်အခမဲ့ဂီတ: TeknoAXE ရဲ့မူပိုင်အခမဲ့ဂီတ (ပျင်းရိ Pirouettes) https://www.youtube.com/watch?v=WhumIQiCu70
FTC ~ ဒါကကမကထဗီဒီယိုကိုမဟုတျပါဘူး